Забур 50 CARS - Nnwom 50 AKCB
1Tweduampɔn, Onyankopɔn, Awurade no kasa,
na ɔfrɛ asase nyinaa
efi apuei kosi atɔe.
2Onyankopɔn hyerɛn fi Sion
kurow a ne fɛ wie pɛyɛ.
3Yɛn Nyankopɔn reba nanso ɔrenyɛ komm;
ogya a ɛhyew nneɛma di nʼanim,
ahum a ɛretu atwa ne ho ahyia.
4Ɔfrɛ ɔsorosoro ne asase,
sɛ ɔrebu ne nkurɔfo atɛn;
5Ɔka se, “Boaboa nnipa a wɔatew wɔn ho no ano ma me;
wɔn a wɔnam afɔrebɔ so ne me yɛɛ apam no.”
6Ɔsoro pae mu ka ne trenee,
na Onyankopɔn ankasa ne otemmufo.
7“Muntie, me nkurɔfo, na mɛkasa,
medi adanse atia wo, Israel;
Mene Onyankopɔn, wo Nyankopɔn no.
8Merenka mo anim wɔ mo afɔrebɔde
anaa mo hyew afɔre a ɛwɔ mʼanim daa no ho.
9Anantwinini a wofi mo mfuw so
anaa mpapo a wofi mo buw mu ho nhia me,
10efisɛ kwae mu aboa biara yɛ me de,
anantwi a wɔwɔ nkoko mpempem so nso saa ara.
11Minim anomaa biara a ɔwɔ mmepɔw no so,
na wuram abɔde nyinaa yɛ me de.
12Sɛ ɔkɔm dee me a, anka merenka nkyerɛ mo;
efisɛ, wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa yɛ me de.
13Mewe anantwinini nam,
na menom mpapo mogya ana?
14Momfa aseda afɔre mma Onyankopɔn,
na munni bɔ a mohyɛɛ Ɔsorosoroni no so,
15na momfrɛ me hiada;
na megye mo na moahyɛ me anuonyam.”
16Nanso amumɔyɛfo de, Onyankopɔn bisa wɔn se,
“Adɛn nti na moka me mmara
na mʼapam da mo ano?
17Mukyi me nkyerɛkyerɛ,
na motow me nsɛm gu mo akyi.
18Sɛ muhu ɔkorɔmfo a mode mo ho bɔ no;
na mo ne nguaman nso bɔ.
19Mode mo ano yɛ bɔne,
na mode mo tɛkrɛma boaboa nnaadaa ano.
20Mokasa tia mo nuabarima bere biara
na mosopa mo ankasa na ba.
21Moayɛ eyinom nyinaa; nanso manka hwee,
enti mususuw sɛ mete sɛ mo.
Nanso mɛka mo anim,
na mede mo sobo asi mo anim.
22“Munnwen eyi ho, mo a mo werɛ fi Onyankopɔn,
anyɛ saa a, mɛtetew mo mu nketenkete a obiara remmegye mo;
23Nea ɔbɔ aseda afɔre no hyɛ me anuonyam,
na osiesie kwan
sɛnea mɛda Onyankopɔn nkwagye adi akyerɛ no.”
AKCB : Nnwom 50